June 2019 ⋆ Lovely Myanmar
ချစ်သူကောင်မလေးရဲ့အခန်း မြင်ပြီးနောက် လမ်းခွဲလိုက်တဲ့ အမျိုးသား..
By Aung Aung on Sunday, June 30, 2019
အရမ်းချစ်ကြတဲ့ စုံတွဲလေးတွေ သတိထားသင့်တဲ့ သတင်းလေးကို တင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ထိုင်ဝမ်မှာရှိတဲ့ ၃နှစ်ကြာတွဲခဲ့တဲ့ စုံတွဲလေးအကြောင်းပါ။ဖြစ်ပုံကလည်းဆန်းတာလှပါဘိ။ ထိုင်ဝမ်မှာရှိတဲ့ အင်တာနက်သုံးစွဲသူတွေကြားပျံ့နှံ့နေတဲ့ သတင်းအရ ထိုင်ဝမ်အမျိုးသားတစ်ယောက်က သူချစ်ရတဲ့ မိန်းကလေးပြောခဲ့တဲ့ ကတိကိုအမြဲနားလည်း လက်ခံစောင့်ထိန်းခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ကတိစကားကတော့ “ငါ့အခန်းကိုမဝင်နဲ့”လို့မိန်းကလေးက တောင်းဆိုထားတာပါ။ယောက်ျားလေးကလည်း ကတိတည်တဲ့အနေနဲ့ ဘယ်တော့မှာ မိန်းကလေးအခန်းထဲ မဝင်ခဲ့ပါဘူး။ အဲ့လိုနဲ့တွဲလာတာ ၃နှစ်ကြာချစ်ခရီးလမ်းကို ဖြတ်သန်းခဲ့ပြီးပါပြီ။မိန်းကလေးတောင်းဆိုတဲ့ ကတိကလည်း သူတို့ချစ်စုံတွဲ သက်တမ်းတလျှောက် တစ်ခုတည်းသော စည်းမျဉ်းတစ်ခုပါ။ တစ်နေ့မှာတော့…ယောက်ျားလေးဖြစ်သူက သူ့ချစ်သူမိန်းကလေးရှိရာ အိမ်သို့အလည်သွားချိန်မှာပဲ သူတို့ချစ်ခရီးလမ်း အဆုံးသတ်ခဲ့ရပါတယ်။ အဲ့နေ့က သူရောက်နေချိန်မှာ သူ့ချစ်သူမိန်းကလေးက ရေချိုးနေချိန်ပါ၊အဲ့အချိန်မှာ ချစ်သူမိန်းကလေးအမေက သူ့ကို အကူအညီ တစ်ခုတောင်းပါတယ်။ အဲ့တာကတော့ ချစ်သူမိန်းကလေးဝတ်ဖို့အဝတ်အသစ်တစ်ထည် အခန်းထဲကနေ သွားယူပေးပါလို့ ဆိုလိုက်တာပါ။ သူ့စိတ်ထဲမှတော့ ဒါဟာတစ်ခုခုကိုဖန်တီးနေတယ်လို့ ခံစားရသလို ပျော်ရွှင်နေမိတယ်လေ။သူ့ပျော်ရွှင်မှုတွေ ရပ်တန့်သွားပါတယ်။သူ့ချစ်သူမိန်းကလေးအခန်းထဲ ကမြင်ကွင်းကိုမြင်လိုက်ရလို့ပါ။ ညစ်ပတ်နေတဲ့အဝတ်အစားတွေ၊ရှုပ်ပွနေတဲ့ …
ဒီကလေးတွေကို သဘောကျတယ် ဘယ်ကထင်လဲ ……ကိုယ်တို့လှိုင်သာယာကျူးရပ်ကွက်က ကလေးတွေ ။သူတို့အတွက် Ocean စင်တာဟာမိုးခိုပြီးသေးပေါက်တဲ့အရပ်ပဲ ။ . သူတို့တွေ ပုံမှန်လုပ်နေကျအလုပ်က စင်တာရှေ့ marketing လုပ်ရင်းအခမဲ့ဝေနေတဲ့ကော်ဖီကို ခပ်တည်တည်တောင်းတယ် ပြီးရင် စင်တာထဲဝင် စာအုပ်တန်းကိုတွေ့အောင်ရှာပြီး ကော်ဖီသောက်ရင်း စာဖတ်တော့တာပဲ ။ . အင်္ကျိအနီနဲ့မောင်က ဆရာ…… သူက စာအုပ်အတော်များများကို ဒီမှာလာဖတ်နေကျ စီနီယာကြီး နောက်ပေါက်ချာတိတ်တွေကို ဘာဘာဖတ်ကွဆိုပြီး ဂိုက်လိုင်းချပေးတယ် ။ Credit- Ko Zay Ko KO Unicode Version ဒီကလေးတှကေို သဘောကတြယျ ဘယျကထငျလဲ ……ကိုယျတို့လှိုငျသာယာကြူးရပျကှကျက ကလေးတှေ ။သူတို့အတှကျ Ocean စငျတာဟာမိုးခိုပွီးသေးပေါကျတဲ့အရပျပဲ ။ . သူတို့တှေ ပုံမှနျလုပျနကေအြလုပျက စငျတာရှေ့ marketing လုပျရငျးအခမဲ့ဝနေတေဲ့ကျောဖီကို …
၂၉.၆.၂၀၁၉ရက်နေ့ ည ၇နာရီ၁၀မိနစ်ဝန်းကျင် YBS-99 ယာဉ်လိုင်း 3P-9561လှိုင်သာယာမှတောင်ဒဂုံအသွား ရှစ်မိုင်တံတားအောက် မီးပွိုင့်တွင်မီးပွိ်ုင့်မိ၍ ယာဉ်ရပ်ထားချိန်တွင် ခရီးသည် အမျိုးသားတစ်ဦးမှ ဆင်းမည်ဖြစ်၍ တံခါးဖွင့်ပေးရန်ပြောပါသည်။ ယာဉ်မောင်းမှ မီးပွိုင့်တွင်ဖြစ်၍ တံခါးဖွင့်ပေးလို့မရကြောင်း ရှေ့မှတ်တိုင်ရောက်မှ ဆင်းပါကြောင်းပြောသည်ကို ခရီးသည်အမျိုးသားက လက်မခံဘဲ ဆင်းမည်ဖြစ်၍ အဆင်းတံခါးကိုဖွင့်ပေးရန်သာပြောပါသည်။ ယာဉ်မောင်းက တံခါးမဖွင့်ပေးသည်ကိုမကျေနပ်၍ ဦးစွာ အဆင်းတံခါး အပေါ်ရှိ လေဘားကိုဖွင့်၍ ဆင်းရန် ကြိုးစားပြီးဖွင့်မရသောကြောင့် အရေးပေါ်အသုံးပြုရန်ယာဉ်တွင်တပ်ထားသည့်စိန်တူကိုယူကာ အဆင်းတံခါး ညာဘက်ခြမ်းကို ပစ်ပေါက်ရိုက်ခွဲပြီးထပ်မံ၍ တံခါးကို ခြေဖြင့် ကန်ကာ ပွင့်အောင်ပြုလုပ်ပြီး ဆင်းသွားပါသည်။ ယခုကဲ့သို့ မင်းမဲ့စရိုက်ဆန်စွာရိုင်းစိုင်းသော အပြုအမူမျိုးသည် အခြားခရီးသည်များအတွက်များစွာ အနှောင့်အယှက်ဖြစ်ခဲ့ရကြောင်းနှင့်မိမိတို့အနေဖြင့် သက်ဆိုင်ရာရဲစခန်းတွင် video file နှင့်တကွ အကြောင်းကြားပီးဖြစ်ပါကြောင်း ခရီးသွားပြည်သူများထံတင်ပြအပ်ပါတယ် ခင်ဗျာ Omni Focus_YBS ရုပ်သံဖိုင် ကြည့်ရန်နှိပ်ပါ …
နေပြည်တော် Wisdom Hill ပိုင်ရှင်ဦးပညာ၏ အမဖြစ်သူမှပြောပြလိုက်တဲ့သူ့ရဲ့ရပ်တည်ချက် နေပြည်တော်မှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ မူကြိုကျောင်းတစ်ခုက သက်ငယ်မုဒိမ်းအမှုဟာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ လူမှုကွန်ယက်သုံးစွဲသူတွေကြားထဲမှာ နာမည်ကြီးနေခဲ့ပြီး အမှုမှန်ပေါ်ပေါက်ရေးအတွက် တောင်းဆိုနေကြပါတယ်။ ဒီအမှုနဲ့ပတ်သတ်ပြီး လက်ရှိအချိန်အထိ စွပ်စွဲခံထားရတဲ့သူတွေဘက်ကတုန့်ပြန်ပြောကြားမှုမရှိခဲ့ပေမယ့် မူကြိုကျောင်းပိုင်ရှင်ရဲ့အစ်မဖြစ်သူကတော့ သူ့ရဲ့ရပ်တည်ချက်ကို လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာပေါ်မှာ အခုလိုပြောပြခဲ့တာပါ။ နေပြည်တော် သက်ငယ်မုဒိန်းအမှုနှင့် ပတ်သတ်၍ Signature Fashion – designed by Thiri May page ၏ ရပ်တည်ချက်အား အများပြည်သူ သိရှိစေရန်တင်ပြခြင်း ************ ဖော်ပြပါကိစ္စနှင့် စပ်လျဉ်း၍ Signature Fashion ၏ Founder – ဒီဇိုင်နာဖြစ်သူ ကျွန်မ သီရိမေသည် Wisdom Hill ကျောင်းပိုင်ရှင် ဦးပညာ၏ အမအရင်းဖြစ်ခြင်းကြောင့် ဆွေမျိုးသားချင်းကို ကာကွယ်ချင်သော စိတ်သက်သက်ဖြင့် ဆိုရှယ်မီဒီယာတွင် …
မတော်တဆ ဖုန်းထဲရေ၀င်သွားခဲ့ရင် ဒီအချက်တွေကို မဖြစ်မနေလုပ်ပါ
[ ဖုန်းပြင်​ဆိုင်​သွားစရာမလိုပဲ မိမိအိမ်​မှာ ဖုန်းကိုပြန်​​ကောင်း​အောင်​လုပ်​နိုင်​ပါတယ်​ ] တကယ်လို့ သင့်ရဲ့ဖုန်းကရေထဲကျသွားတဲ့အခါ ၊ရေစိုသွားတဲ့အခါ- ဖုန်းကိုချက်ချင်းအသုံးမပြုပါနဲ့။ ရေထဲကဆယ်ယူထားပြီး အရင်ဆုံးပါဝါပိတ်ထားလိုက်ပါ။ Sim ကဒ်နဲ့တခြား SD ကဒ်လိုမျိုးအရာတွေကိုထုတ်ထားပါ။ သဘတ် ဒါမှမဟုတ် ရေစုတ်မယ့်အဝတ်တစ်ခုခုနဲ့ ဖုန်းကိုသုတ်ပေးပါ။ ပြီးရင်တော့ ဖုန်းရဲ့အပေါက်လေးတွေကနေရေတွေထွက်လာနိုင်အောင် ဖြေးဖြေးသာလှုပ်ခါပေးပါ။ ရေစိုနေတဲ့ဖုန်းကို ဘယ်လိုအခြောက်ခံမလဲ? ဖုန်းရေစိုသွားတဲ့အခါ ဆန်ကိုလဲအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ဆန်က တော်တော်လေးရေစုပ်ယူအားကောင်းတာကြောင့်ပါ။ ဇလုံကြီးကြီးတစ်ခုထဲမှာ ဖုန်းကိုအရင်ထည့်ပါ။ ပြီးရင် ဆန်တွေကို ဖုန်းနှစ်မြုပ်သွားအောင်ထိ ဖြည့်ထားပါ။ အဲ့ဒီအတိုင်း ဆန်ထဲမှာ ၂၄နာရီတစ်ရက်ကြာအောင်ထားပေးပါ။. တစ်ရက်ပြည့်သွားပြီဆိုရင်တော့ ဖုန်းကိုပါဝါပြန်ဖွင့်ကြည့်ပါ။ တကယ်လို့ ဖုန်းကပြန်မပွင့်လာသေးဘူးဆိုရင် နောက်တစ်ရက်လောက်ထပ်မြုပ်ထားပါ။ ၃၊၄ ကြိမ်လောက်လုပ်ပြီးလို့မှ ပါဝါပြန်မပွင့်လာသေးဘူးဆိုရင်တော့ ဖုန်းကိုအသုံးပြုလို့မရနိုင်တော့ပါဘူး။ ဆန် အစား ဆီလီကာဂျယ်ကိုလဲ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ တကယ်လို့ သင့်အိမ်မှာ နွေးနွေးထွေးထွေးရှိတဲ့ ဗီရိုတစ်လုံးလောက်ရှိမယ်ဆိုရင် ဗီရိုထဲမှာ …
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ မိခင်တွေထဲကတစ်ယောက်မို့ သက်ငယ်မုဒိမ်းမှုတွေကိုပြင်းထန်စွာအပြစ်ပေးရန်အူဝဲတောင်းဆို
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ မိခင်တွေထဲကတယောက်မို့ သက်ငယ်မုဒိမ်းတရားဥပဒေစိုးမိုးစေရန် အကြီးအကဲများကိုတောင်းဆိုလိုက်တဲ့ အူဝဲ အူဝဲဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အအောင်မြင်ဆုံးပရိတ်သတ်အများဆုံးမင်းသမီးတလတ်ဖြစ်ပါတယ်။ထို့ အပြင်သူမဟာသမီးလေးတယောက်ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှမိခင်တဦးဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့ မှာတော့သူမကသက်ငယ်မုဒိမ်းမှုတွေကိုပြင်းထန်စွာအပြစ်ပေးရန်လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာရေးသားလိုက်ပါတယ်။ အူဝဲရေးသားချက်ကတော့”သမီးတယောက်ရဲ့ အမေအဖြစ်ရှိနေတဲ့ အူဝဲအတွက်တော့ အရမ်းခံစားရတယ်အမှုမှန် အမြန်ပေါ်ပေါက်ပါစေမြန်မာပြည်မှာ တရားဥပဒေပိုမိုစိုးမိုးလာရန်ပြည်သူတွေတရားဥပဒေကိုပိုမိုယုံကြည် လေးစားလိုက်နာလာရန်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးတွင် ပိုမိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လာစေရန်နိုင်ငံတော်အစိုးရနှင့်သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများကနေပြည်တော်က ကလေးမုဒိမ်းမှု၏တရားခံအစစ် ကိုမပျက်မကွက်ဖော်ထုတ်ပေးပါရန်ပြည်သူများကလေးစားစွာတောင်းဆိုလိုက်ပါသည်။#JusticeForVictoriaဆိုပီးရေးသားထားပါတယ် ပရိတ်သတ်ကြီးလဲတူတူပူပေါင်းကူညီမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ် အမှုမှန်ပေါ်ပါစေ မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေအေးချမ်းပါစေ။ဖတ်ရှူပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်။ Crd.Celepublic.com
ဝိညာဉ်လောက နှင့် လူ့လောကကြားက ဆက်နွယ်မှုကို တွေ့မြင်ရမယ့် “ကြိမ်နှုန်း” ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီး OFFICIAL TRAILER
ပရိသတ်တွေချစ်ကြတဲ့ မင်းသမီးချောလေး အိန္ဒြာကျော်ဇင်က သူမချစ်တဲ့ အနုပညာလုပ်ငန်းတွေကို ဆက်တိုက်ဆိုသလို လုပ်ကိုင်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ အိန္ဒြာကျော်ဇင်က အနုပညာလုပ်ငန်းတွေကို လုပ်ကိုင်နေရင်း သူမရဲ့ မိသားစုဘဝလေးကို အချိန်မျှတစွာနဲ့ သာယာလှပအောင် တည်ထောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ အိန္ဒြာကျော်ဇင်က သရုပ်ဆောင်ပြေတီဦးနဲ့အတူတူ သာယာလှပတဲ့ မိသားစုဘဝလေးကို ထူထောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ အခုလာမယ့် ဇူလိုင်လ(၁၈)ရက်နေ့မှာတော့ အိန္ဒြာကျော်ဇင်ရဲ့ နောက်ထပ်အနုပညာခြေလှမ်းအသစ်ဖြစ်တဲ့ “ကြိမ်နှုန်း” ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးကို ရုံတင်ပြသတော့မှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မိုမိုလေးပရိသတ်တွေအတွက် “ကြိမ်နှုန်း” ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးရဲ့ OFFICIAL TRAILER ကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ ” ကြိမ်နှုန်း – Frequency ” ရုပ်ရှင်ကားကြီး၏ OFFICIAL TRAILER “ကြိမ်နှုန်း” ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးကို ဒါရိုက်တာ ခန့်မာန်ထည်က ရိုက်ကူးပုံဖော်ထားတာဖြစ်ပြီး အကယ်ဒမီ ထွန်းအိန္ဒြာဗိုနဲ့ အိန္ဒြာကျော်ဇင်တို့က အပြိုင်အဆိုင် သရုပ်ဆောင်ထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ “ကြိမ်နှုန်း” …
အကြင်နာ အနမ်းလေးတွေခြွေရင်း ကြည်နူး ပျော်ရွှင်နေကြတဲ့ပုံလေးတွေ တင်လိုက်တဲ့ တိုင်ရွန်နဲ့ နော်ဖောအယ်ထား
အကြင်နာ အနမ်းလေးတွေခြွေရင်း ကြည်နူး ပျော်ရွှင်နေကြတဲ့ပုံလေးတွေ တင်လိုက်တဲ့ တိုင်ရွန်နဲ့ နော်ဖောအယ်ထား မော်ဒယ် ၊ သရုပ်ဆောင် မင်းသားချောလေး တိုင်ရွန်ကတော့ တောင့်တောင့်ဖြောင့်ဖြောင့် ခန္ဓာကိုယ် အချိုးအစားတွေနဲ့ ချောမောခန့်ညားတဲ့ မျက်နှာ သွင်ပြင်ကို ပိုင်ဆိုင်ထားတာကြောင့် နှုတ်ခမ်းနီမလေးတွေရဲ့ ပါးစပ်ဖျားမှာ ရေပန်းစားနေသူတစ်ဦး ဖြစ်ပါတယ် ။ အမိုက်စား တက်တူးတွေနဲ့ ကိုရီးယား မင်းသားတစ်ယောက်လို ရုပ်ရည်မျိုးနဲ့ တိုင်ရွန်က မာန ကင်းစင်ပြီး ပရိသတ်တွေအပေါ်မှာ ခင်မင်ဖော်ရွေစွာ ဆက်ဆံတတ်သူလည်း ဖြစ်ပါတယ် ။ သူကတော့ အနုပညာ အလုပ်တွေ ဇာတ်တိုက်လုပ်ကိုင် နေတာဖြစ်ပြီး သူရဲ့ အနုပညာ လှုပ်ရှားမှု ပုံရိပ်တွေကိုလည်း ဖေ့ဘွတ် စာမျက်နှာပေါ်တွင် ဖော်ပြလေ့ရှိတာလည်း တွေ့ရပါတယ် ။ လတ်တလောမှာတော့ နော်ဖောအယ်ထားနဲ့အတူ ကြည်နူးသာယာစွာ အကြင်နာအနမ်းလေးတွေ …
ရောဂါမျိုးစုံ ၂ ခါလောက်ပြတာနဲ့ ပျောက်တယ်ဆိုတဲ့ ဆေးဆရာ
ရာဂါမျိုးစုံ ၂ ခါလောက်ပြတာနဲ့ ပျောက်တယ်ဆိုတဲ့ တိုက်ကြီးမြို့နယ် စာဖြူစုရွာက ဆေးဆရာ နာမည်ကြီးနေလို့ ရပ်ကွက်ထဲက လေဖြတ်နေတဲ့ အဒေါ်ကြီးဆေးခန်းသွားပြရင်းလိုက်ကြည့်တာ ကားတွေကတော့မြင်တဲ့ အတိုင်းပါပဲ လေဖြတ်နေတဲ့ အဒေါ်ကြီးကတော့ ၂ ခေါက်ပြပြီး လမ်းလျှောက်သွားနိုင်နေပါသည်။ ကင်ဆာကအစ ကုတယ်ပြောတာပဲ ဆေးဘိုးကလည်း တစ်ခါပြ ၂၀၀၀ လောက်ပဲကျပါတယ် တိုက်ကြီး တန်ပိုဂိတ် အကျော် တာဂွလမ်းခွဲကနေ ၂ မိုင်နီးပါးလောက်ဝင်ရပါတယ် ဂျိမ်း ========== Unicode ရာဂါမြိုးစုံ ၂ ခါလောကျပွတာနဲ့ ပြောကျတယျဆိုတဲ့ တိုကျကွီးမွို့နယျ စာဖွူစုရှာက ဆေးဆရာ နာမညျကွီးနလေို့ ရပျကှကျထဲက လဖွေတျနတေဲ့ အဒျေါကွီးဆေးခနျးသှားပွရငျးလိုကျကွညျ့တာ ကားတှကေတော့မွငျတဲ့ အတိုငျးပါပဲ လဖွေတျနတေဲ့ အဒျေါကွီးကတော့ ၂ ခေါကျပွပွီး လမျးလြှောကျသှားနိုငျနပေါသညျ။ ကငျဆာကအစ ကုတယျပွောတာပဲ ဆေးဘိုးကလညျး တဈခါပွ …
တွေ့ရှိပါက ဆက်သွယ်ပေးကြပါရန်.. (၈)တန်း ကျောင်းသူနှစ်ဦး ပျောက်ဆုံးနေလို့ပါ
၈-တန်း ကျောင်းသူနှစ်ဦး ပျောက်ဆုံးနေလို့ပါတဲ့ ကယား ပြည်နယ် ဖားဆောင်းမြို့ မော်ချီး -လိုခါးလိုရွာမှ ၈ တန်းကျောင်းသူ နှစ်ဦး ပျောက်ဆုံးနေပါသဖြင့် တွေ့ရှိပါက အောက်ပါ ဖုန်းနံပါတ်သို့ ဆက်သွယ် အကြောင်းကြားပေးကြပါရန် လေးစားစွာ အကူအညီ တောင်းခံအပ်ပါသည်။ ပျောက်ဆုံးနေသော ၈-တန်း ကျောင်းသူနှစ်ဦးဖြစ်တဲ့ နော်စေးစေးထူး နဲ့ နော်ဘလူးနေစေး တို့သည် ဇွန် ၁၀ ရက် တနင်္လာနေ့ကတည်းက ပျောက်သွားတယ်လို့သိရတယ် ဒီရက် နော်ဘလူးနေစေး 09796115756 သူ့ ဖုန်းနဲ့ ဆက်လာတော့ လွိုင်ကော် မြို့ နယ် နောင်ယားရပ်ကွက်ထဲေ ရာက်နေတယ် အလုပ်လုပ်ဖို့လာတယ် ပြောပြီး ဖုန်းချလိုက်ပါတယ် ဖုန်းက လဲ စက်ပိတ် သွားပါတယ် အခုထိ အဆက်သွယ်မရသေးပါဘူး တွေ့ ရှိပါက ဆက်သွယ် …